क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्दै सन्दिप लामिछाने, पारिश्रमिक कति पाउँछन् ? | NepalDut
क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्दै सन्दिप लामिछाने, पारिश्रमिक कति पाउँछन् ?
क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएल टि-२० को अक्सनमा नेपाली सन्दिप लामिछाने ठुलो मूल्यमा बिक्रि भएका छन्।
सीपीएल टि-२० को अघिल्लो सिजन सन्दिपले ५ खेलमा कुल ७ विकेट लिएका थिए।
यो सिजन क्यारेबियन प्रिमियर लिग अगस्ट २१ देखि सेप्टेम्बर २७ सम्म वेस्टइन्डिजमा आयोजना हुने बताईएको छ। सीपीएल ड्राफ्टमा कुल ५३६ जना खेलाडीहरु रहेका छन्।